11 Zvino ndakapiwa tsanga yakaita sekatanda+ pandakaudzwa kuti: “Simuka uyere nzvimbo tsvene yetemberi+ yaMwari neatari nevaya vanonamatira mairi. 2 Asi kana chiri chivanze chiri kunze+ kwenzvimbo tsvene yetemberi, chisiye uye usachiyera, nokuti chakapiwa mamwe marudzi,+ uye iwo achatsika-tsika guta dzvene+ kwemwedzi ine makumi mana nemiviri.+ 3 Ndichaita kuti zvapupu zvangu zviviri+ zviprofite+ zvakapfeka masaga+ kwemazuva ane chiuru chine mazana maviri nemakumi matanhatu.” 4 Izvi zvinofananidzirwa nemiorivhi miviri+ nezvigadziko zvemarambi+ zviviri uye izvo zvimire pamberi paShe wenyika.+ 5 Kana munhu achida kuzvikuvadza, moto unobuda mumiromo yazvo woparadza vavengi vazvo;+ uye kana munhu akada kuzvikuvadza, anofanira kuurayiwa saizvozvo. 6 Izvi zvine simba rokuvhara denga+ kuti mvura irege kunaya+ mumazuva okuprofita kwazvo, uye zvine simba pamusoro pemvura rokuishandura kuva ropa+ nokurova nyika nematambudziko emarudzi ose pose pazvinenge zvichida hazvo. 7 Pazvinenge zvapedza kupupura kwazvo, chikara chinobuda mugomba rakadzikadzika+ chicharwa nazvo chozvikunda uye chozviuraya.+ 8 Zvitunha zvazvo zvichava mumugwagwa wakafara weguta guru rinonzi Sodhoma+ neIjipiti mupfungwa yomudzimu, umo Ishe wazvo akarovererwawo.+ 9 Vaya vanobva kuvanhu nemadzinza nendimi nemarudzi+ vachatarira zvitunha zvazvo kwemazuva matatu nehafu,+ uye havaiti kuti zvitunha zvazvo zvivigwe muguva. 10 Vaya vagere panyika vachafarira+ kufa kwazvo uye vachapembera nomufaro, uye vachatumirana zvipo,+ nokuti vaprofita vaviri ava vakarwadzisa vaya vanogara panyika. 11 Pashure pemazuva matatu nehafu+ mudzimu woupenyu wakabva kuna Mwari wakapinda mazviri,+ izvo zvikamira netsoka dzazvo, uye vaya vaizviona vakabatwa nokutya kukuru. 12 Zvakanzwa inzwi guru+ richibva kudenga richiti kwazviri: “Kwirai kuno.”+ Zvakakwira kudenga zviri mugore, uye vavengi vazvo vakazviona. 13 Muawa iyoyo kudengenyeka kukuru kwenyika kwakaitika, chegumi+ cheguta chikawa; uye vanhu vane zviuru zvinomwe vakaurayiwa nokudengenyeka kwenyika, uye vamwe vose vakatya vakakudza Mwari wokudenga.+ 14 Nhamo yechipiri+ yapfuura. Tarira! Nhamo yechitatu iri kukurumidza kuuya. 15 Ngirozi yechinomwe yakaridza bhosvo rayo.+ Manzwi makuru akanzwika kudenga, achiti: “Umambo hwenyika hwava umambo hwaShe+ wedu nohwaKristu+ wake, uye Iye achatonga samambo nokusingaperi-peri.”+ 16 Vakuru vane makumi maviri nevana+ vakanga vagere pamberi paMwari pazvigaro zvavo zvoushe vakawira pasi nezviso zvavo+ vakanamata Mwari,+ 17 vachiti: “Tinokuongai,+ Jehovha Mwari, Wemasimbaose,+ Imi muripo+ uye makanga muripo, nokuti matora simba renyu guru+ uye matanga kutonga samambo.+ 18 Asi marudzi akava nehasha, hasha dzenyu dzakauya, uye nguva yakatarwa yokuti vakafa vatongwe, kuti mupe varanda venyu vaprofita+ nevatsvene nevaya vanotya zita renyu mubayiro+ wavo, vaduku nevakuru,+ kuti muparadze+ vaya vanoparadza nyika.”+ 19 Nzvimbo tsvene yetemberi yaMwari iri kudenga+ yakavhurwa, uye areka+ yesungano yake yakaonekwa iri munzvimbo tsvene+ yetemberi yake. Naizvozvo pakava nemheni nemanzwi nokutinhira nokudengenyeka kwenyika nechimvuramabwe chikuru.